Posted by FAMILY at Saturday, December 24, 2011 No comments:
အခန်းများစွာနဲ. နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ကို
ခင်ပွန်း ဇနီး အိမ်ထောင်ဖက်ကို
နှစ်ပတ်လည်နေ.ကို ဥရောပအလယ်ခေတ်လောက်မှာ ဂျာမဏီနိုင်ငံကနေ စတင်
ဖြစ်ပေါ်လာတာလို.ရေးထားတာကို မှတ်သားမိပါတယ်။အိမ်ထောင်ဖက်အချင်းချင်းလဲ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအမှတ်တရ ပေးကြတယ်။အရင်တုန်းကတော့ တိုင်းပြည်တွေ မတူတော့ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ဓလေ့လဲမတူကြဘူးပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ နိုင်ငံအများစုကနေ လူသိများလာကြပြီး နှစ်အလိုက် နှစ်ပတ်လည်နေ.တွေကိုအမည်သတ်မှတ်ကျပြီး
လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးကြတာဟာ အစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ကျမတို.အများစု သိကြတာက ငွေရတု၊ရွှေရတု၊စိန်ရတု လောက် သာသိကြပါတယ်။
အားလုံးကှိုဗဟုသုတအနေနဲ. နှစ်ပတ်လည်နှစ်နဲ. သူ.အထိမ်းအမှတ်လေးတွေကို ပြန်လည်
လေးနှစ်............ သစ်သီး (သို.မဟုတ်) ပန်း
ခုနှစ်နှစ်...........သိုးမွေး (သို.မဟုတ်) ကြေးနီ
ဆယ့်နှစ်နှစ်......ပိုးချည်မျှင် (သို.မဟုတ်) လျှော်ဖြင့်ယက်ထားသောပိတ်စ
ဆိုပြီးတော့ နှစ်ပတ်လည်နှစ်အလိုက် ခွဲခြားထားပါတယ်။လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုလဲ
နှစ်အလိုက် သူနဲ.သက်ဆိုင်တဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေကို ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ
ပေးတတ်ကြပါတယ်။သူငယ်ချင်းများ သားသမီးများက သူတို.အတွက် လက်တွဲညီပြီး
လိုက်ဖက်တဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းတလျှောက် မှာ သာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြဖို. လက်ဆောင်၊
ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို.သလေ့ရှိကြပါတယ်ဆိုတာ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မိသားစုအားလုံး သာယာချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေ။ မြန်မာမြေမှာမွေး မြန်မာ့မြေမှာ ကြီးတဲဒို. မြန်မာလူမျိုးအားလုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေ။ပြည်တွင်းပြည်ပ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း
Posted by FAMILY at Wednesday, July 06, 20112comments:
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပေါလ်မှာ ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်အဖြစ် သူ.အစ်ကိုကြီးထံမှ
ကားတစ်စီးရသည်။ ခရစ္စမတ်အကြိုနေ.မှာ သူ.ရုံးခန်းကထွက်လာတော့ လမ်းဘေးမှာ
ကောင်လေးတစ်ယောက်က တောက်ပသော သူ.ကားသစ်ကြီးကို သဘောကျစွာ လည့်ပတ်
ကြည့်နေတာ မြင်ရသည်။ကြည့်ရုံနှင့် အားမရသေးဟန်ဖြင့် ကောင်လေးကမေးသည်။
“ဒါ အစ်ကို.ကားလားတဲ့” ပေါလ်က ခေါင်းညိတ်ပြီး “အေးကွ၊ငါ့အစ်ကိုက ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်ပေးတာ”
“ဟာ....ခင်ဗျားအစ်ကိုက ခင်ဗျားကို အလကားပေးတာ.......ဟုတ်လား၊
ဆုတောင်းလို.ရရင် ကောင်လေးဘာဆုတောင်းမလဲဆိုတာ ပေါလ်တွေးနေမိသည်။သူ.မှာ လည်း
အဲ့ဒီလို အကိုမျိုးတစ်ယောက် ရပါစေလို. ဆုတောင်းမှာပေါ့။
သို.သော် ကောင်လေးထံမှ နောက်ထပ်ကြားလိုက်ရသော စကားကြောင့်ပေါလ်ကြက်သီးမွေးညင်း
ထသွားသည်။ “ကျွန်တော် အဲဒီလို အစ်ကိုမျိုး ဖြစ်ချင်လိုက်တာဗျာ” တဲ့။
ကောင်လေးကို သူအံ့အားသင့်စွာ ငေးကြည့်နေမိသည်။ထို.နောက်မှ ရုတ်တရက် ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိ။“မင်းငါ့ကားလိုက်စီး ကြည့်မလား ”ဟုမေးမိသည်။
ကားစီးပြီး ခဏလေးကြာတော့ ကောင်လေးက ပေါလ်ဘက်သို.လှည့်ကာ “အစ်ကိုရေ .......
ကျွန်တော်တို. အိမ်ဘက် လှည့်မောင်းပေးလို.ရမလားဗျ” ဟုမေးသည်။
သူ.မျက်လုံးတွေတောက်ပနေတာကြည့်ပြီး ပေါလ်ပြုံးမိသည်။ကောင်လေးစိတ်ထဲ ဘာရှိနေသလဲ
သူတွေးမိသည်။သူ ကားသစ်ကြီးစီးပြီး အိမ်ပြန်လာတာ အိမ်နီးနားခြင်းတွေကို ကြွားချင်ပုံပဲ။
သို.သော် သည်တစ်ခါလည်း ပေါလ်မှားပြန်ပါသည်။
“ဟိုလှေကားနှစ်ဆင့်နဲ.အိမ်ရှေ. ရပ်ပေးပါဗျာ” ကောင်လေးကဆိုသည်။
တက်သွားတုန်းကလို မမြန်။သူက ကလေးတစ်ယောက်ကို ချီသူလာခြင်းဖြစ်သည်။
ခြေမသန်သော သူ.ညီလေး။သူကညီလေးကိုအောက်ဆုံးလှေကားထစ်မှာ ထိုင်ခိုင်းသည်။
သူ.လက်တစ်ဘက်က ညီလေးကိုတင်းတင်းဖက်ထားပြီး ကားကိုပြသည်။
“ဟောဒီမှာတွေ.လားညီလေး အပေါ်ထပ်မှာတုန်းက အစ်ကိုကြီးပြောတာလေ ၊ဒါသူ.အစ်ကိုကြီးက ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပေးတာတဲ့၊ သူ.ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှ မကုန်ဘူး၊နောက်ကျရင် အစ်ကိုကြီးလဲ လည်းညီလေးကို ဒီလိုမျိုးကားတစ်စီး ၀ယ်ပေးမယ်၊အဲ့ဒီအခါကျတော့ ညီလေးကို အစ်ကိုကြီးပြောတဲ့
ခရစ္စမတ်အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ပြထားတဲ့ အလှအပ ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ ညီလေး လိုက်ကြည့်နိုင်မှာ ပေါ့ကွ”
တဲ့ သူက အားပါးတရ ပြောနေသည်။
ပေါလ် ကားထဲက ထွက်လာပြီး ခြေမသန်သော ကလေးငယ်လေးကိုချီ၍ကားရှေ.ခန်းထဲ ထည့်သည်။
အစ်ကိုလုပ်သည့်ကောင်လေးက ၀မ်းသာအားရ သူ.ညီလေးဘေးမှ ၀င်ထိုင်သည်။
အဲသည်နေ.က သူတို.သုံးယောက် လျှောက်လည်ကြသည့်အတွေ.အကြုံမှာ သုံးယောက်လုံးအတွက်
အထူးသဖြင့်ပေါလ်အဖို. သင်ခန်းစာ တစ်ခု မှတ်မှတ်သားသား ရခဲ့သည်။
ယူရခြင်းအရာ ထက် ပေးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ပီတိက ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ် ချိုမြိန်လှ၏ ....
မူရင်း ။ ။ Dan Clkark ၏ A Brother Like That(ဘာသာပြန် ဆရာ ဖေမြင့်)
ချစ်ညီမလေးရေ “ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ.လေးဖြစ်ပါစေလို”. မမကြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကိုကိုမမ အယောက်တိုင်းက သူတို.ရဲ့ မောင်ညီမလေးတွေ ကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ပံပိုးပေးချင်တဲ့
အဲ့လို အစ်ကိုမျိုး အဲ့လို အမမျိုးတွေပါပဲလို. ညီမလေးဖတ်ဖို. မမ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ညီမလေးရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းလေးဖြောင့်ဖြူးသာယာပါစေ။ဘေးအန္တရာယ်များ ကင်းရှင်းနိုင်ပါစေ။
Posted by FAMILY at Wednesday, June 22, 2011 No comments:
မကြီးကြယ်တဲ့ ၊ အမည်မဖော်တဲ့၊အမှတ်တရ ပြုမနေတဲ့
ကျွန်တော် လူပျိုပေါက် အရွယ်လောက်က ဖြစ်သည်။အဖေနဲ.ကျွန်တော် ဆပ်ကပ်ပွဲအတွက်
လက်မှတ်တန်းစီနေကြသည်။အတော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းပြီးသည့်နောက်တွင် လက်မှတ်ပေါက်နှင့်
ကျွန်တော်တို. ကြားမှာ မိသားစုတစ်ခုသာ ကျန်လေသည်။
သည်မိသားစုကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်သဘောကျနေမိသည်။ကလေးချည်း ရှစ်ယောက် ပါသည်။
တစ်ယောက်မျှ ၁၂နှစ် ပြည့်သေးပုံမရ။သူတို.အသွင်အပြင်တွေ ကြည့်ရုံဖြင့်ပင် ငွေကြေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ထဲက မဟုတ်ကြောင်း သိနိုင်သည်။အ၀တ်အစားတွေက အဖိုးတန်ထဲက မဟုတ်။သို.သော် သပ်သပ်ရပ်ရပ်
ရှိသည်။ကလေးတွေက အမူအရာ ယဉ်ကျေးသည်။မိဘများနောက်မှာ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ လက်ချင်း
ချိတ်ပြီး တန်းစီနေကြသည်။သို.သော် နှုတ်ကမူ ညဘက်တွင် သူတို.ကြည့်ရမည့်ဆပ်ကပ်လူပြက်များ၊
ဆင်လိမ္မာများနှင့်အခြားပြကွက်များအကြောင်းကို အားတက်သရော ပြောဆိုနေကြသည်။ သူတို.လေးတွေခမျာ ဆပ်ကပ်ပွဲ တစ်ခါမျှ ကြည့်ဖူးကြဟန်မတူ။ သည်ညကတော့ သူတို.ဘ၀မှာ တကယ့် အမှတ်တရ ဖြစ်တော့မည့်ပုံမျိုး။
အဖေနှင့်အမေက အုပ်စုထိပ်မှာ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူသည့် အသွင်အပြင်များဖြင့်ရပ်နေကြသည်။
ကလေးတွေ၏ မိခင်က ခင်ပွန်းသည်၏ လက်ကို ကိုင်လျက် သူ.မျက်နှာ ကို ရွှန်းရွှန်းစားစား ကြည့်နေပုံမှာ
“မေ့ချစ်သူ လူစွမ်းကောင်းကြီး ” ဟုနှုတ်ခွန်းဆက်နေဘိသည့်အလား အထင်ကြီးမှု ၊လေးစားမှု လက္ခဏာတွေ အပြည့်ပါသည်။ခင်ပွန်းသည်ကလည်း “အားကိုးစမ်းပါ အချစ်ရယ်” ဟု ခွန်းတုံ.ပြန်နေသည့်နှယ် ဂုဏ်ယူသော အပြုံးနှင့် ချစ်ကြည်နှုးစွာ ကြည့်သည်။
သည်အခိုက် လက်မှတ်ရောင်းသော အမျိုးသမီးက အဖေ လုပ်သူအား လက်မှတ် ဘယ်နှစ်စောင် ယူမလဲ လှမ်းမေးသည်။
“ကျွန်တော် ကလေးလက်မှတ် ရှစ်စောင်နဲ. လူကြီးလက်မှတ်နှစ်စောင်လိုချင်ပါတယ်၊ အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော်တို.တစ်မိသားစုလုံး လာလို.ရမှာ” သူက တက်တက်ကြွကြွပင်ဖြေသည်။
ဇနီးသည်ကသူ.ခင်ပွန်း၏ လက်ကို လွှတ်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းလည်းငုံ.သွားသည်။အမျိုးသား၏နှုတ်ခမ်းတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။သူ ရှေ.သို. အနည်းငယ်တိုးကာ ဘယ်လောက်ဗျာဟူ၍ မေးသည်။
လက်မှတ်ရောင်းသော အမျိုးသမီး က ဈေးနှုန်းတွေ ထပ်ပြောသည်။
အဖေ လုပ်သူမှာ ပိုက်ဆံ အလုံအလောက်မပါ။
သို.သော် သည်အချိန်ကျမှ သူနောက်ဘက်လှည့်ကာ ကလေးတွေကိုအဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ အလုံအလောက်မပါလို. သည်ည ဆပ်ကပ် ကြည့်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဟုသူဘယ်သို.ပြောထွက်နိုင်ပါမည်နည်း။
ဖြစ်ပျက်ပုံ အလုံးစုံကို မြင်ကာ ကျွန်တော့်အဖေ အင်္ကျီအိတ်ထဲ လက်နှိုက်သည်။ ဒေါ်လာ ၂၀တန်တရွက် ထုတ်လာပြီးနောက် မြေကြီးပေါ် အသာ ပစ်ချသည်။(ကျွန်တော်တို.လည်းချမ်းသာသူများမဟုတ်ကြောင်း ကြားဖြတ်ပြော လိုပါသည်)ထို.နောက် အဖေပဲ သည်ပိုက်ဆံကို ပြန်ကောက်ကာ ကလေးများဖခင်ပခုံးကို သွားပုတ်ပြီးပြောသည်။
“ဒီမှာခင်ဗျ စောစောက ခင်ဗျားအိတ်ထဲက ထွက်ကြသွားတယ်”
အဖေဘာလုပ်သည်ဆိုတာ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ကောင်းစွာ နားလည်လိုက်ပါသည်။ဘယ်သူ.ဆီမှာမှသူ လက်ဖြန်.တောင်းခံခဲ့သည်တော့မဟုတ်။သို.သော်သည်လို အသည်းအသန် အရေးတကြီးအချိန်၊ဖခင်တစ်ယောက်အနေနှင့် အရှက်ကြီးရှက်ရမည့်အဖြစ်မျိုးကြုံရအံ့ဆဲဆဲအခိန်တွင် မမြော်လင့်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာသည့် သည်အကူအညီအတွက် သူတစ်ကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်သွားခဲ့သည်။အဖေ့မျက်လုံးအစုံကို သူစူးစိုက်၍ ကြည့်သည်။ဒေါ်လာ ၂၀တန်ကိုင်ထားသော အဖေ့လက်ကို သူ.လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်ကာ တုန်ယင်သောနှုတ်ခမ်းများဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်။
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ၊တစ်ကယ်ကိုကျေးဇူးပါပဲ၊ကျွန်တော့်အတွက်ရော ကျွန်တော့် မိသားစုအတွက်ပါ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဖူးခင်ဗျာ”သည်လို ပြောရင်းသူ.ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တစ်ပေါက် လှိမ့်ဆင်းကြလာသည်။
အဖေနှင့် ကျွန်တော် ကားဆီသို. လှည့်ပြန်ကာ အိမ်သို.ပဲ မောင်းလာခဲ့ကြသည်။အဲသည်ည ဆပ်ကပ်ပွဲသို. ကျွန်တော်တို. မသွားကြပါ။သို.သော် သည်ည သည် အချည်းနှီး ညတော့ လုံးဝ မဟုတ်ခဲ့။
(ဆရာ ဖေမြင့်ရဲ. နှလုံးသားအဟာရ ရသစာများမှ ဘာသာပြန် စာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ)
မူရင်း ။ ။ Dan Clark ၏ The Circus
ဖခင်ဟာ အိမ်ထောင်စုမှာ မိသားစုအတွက် ဦးဆောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို.ရဲ. ဘ၀တစ်သက်တာဟာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို.အတွက် ပေးဆပ်ကြရရှာတယ်။
ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ် ဖေဖေ များ
ကျန်းမာကြပါစေ ဖေဖေများ လို. ဇွန်၁၉ ရက်နေ. ဖခင်များနေ.မှာ ဖခင်များအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို.သလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်စုမှာ ရှေ.က ရှိတဲ့အဖေ
အန္တရာယ် ရှိရင် ကာကွယ်ပေးတဲ့အဖေ
နွေမိုးဆောင်းလဲ မပင်ပန်းတဲ့ အဖေ
လမ်းမှားမသွားအောင် ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့ အဖေ
သားသမီးတွေကို ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့အဖေ
နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာနဲ. စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ အဖေ
Posted by FAMILY at Friday, June 17, 2011 No comments:
မိသားစုလို.ဆိုလိုက်တာနဲ. ဖေဖေ မေမေ နဲ.သားသမီးတွေ အတူတကွ ပေါင်းစည်းနေကြခြင်းလို. ကျမကနားလည်ထားပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်ရဲ.မိသားစုကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိစေချင်ကြတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။ မိသားစုတစ်စုကို ဆောက်တည်ဖို.ဆိုတာ စိတ်ကူးထက် လက်တွေ.ဘ၀က ပို အဓိကကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ.မိသားစုလေးကို ဆောက်တည်ပြီးရင်လဲ မပြိုလဲ မပျက်ဆီးသွားဖို.အတွက် မိသားစုဝင် အယောက်ဆီတိုင်းမှာ တာဝန် အပြည့်ရှိတယ်လို.ကျမအနေနဲ. လေးနက်စွာ ခံယူထားပါတယ်။ တစ်ချို.တွေက “ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ ” လို.ဆိုပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ဘ၀ဆိုတာ တိုတယ်။ မွေးလာကြတယ် နေသွားကြတယ် ပြီးတော့ သေသွားကြတယ်ပေါ။့ ဒါပေမဲ့ လူသားမျိုးဆက်ဆိုတာ ကမ္ဘာကြီး မပျက်သုန်းသရွေ.လူတွေရှိနေသရွေ.တော. အစဉ်အမြဲ ရှိ နေကြမှာပါပဲ ။အသက်ရှိနေသရွေ. ဘ၀ဆိုတာကလဲရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုတော့သိထားသင့်ပါတယ်။အမေနဲ.အဖေကြောင့် လူဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်။ပညာသင်ကြရတယ်။ကြီးပြင်းလို.အရွယ်ရောက်လို. ပညာစုံ ၊အလုပ်အကိုင်လဲရှိ ၊မိဘကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်လည် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးရင်တော့ ကို.ရဲ့ချစ်သူဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာ လိုအပ်လာကြပါပြီ။ဒါကလဲ လူသားမျိုးနွယ်ဆက် မပျက်သုန်းဖို.အတွက် လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ.ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ် ထမ်းဆောင်ကြတယ် ချစ်ခင်ရတဲ့သူနဲ.အတူတူမိသားစုရဲ.ဘယ်လို အခက်အခဲမဆိုရင်ဆိုင်ရဲခြင်းလို. နားလည်မိပါတယ်။အမေနဲ.အဖေကြောင့် ကျမတို.ဖြစ်လာရသလို ကျမတို.ကြောင့်လဲ သားသမီးတွေတဖန် ရှိလာရမှာလဲ ဓမ္မတာပါ။မတူညီကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ခံယူချက်တွေကကွဲပြားနေပါမယ်။
ကိုယ်.ရဲ.ဘ၀တိုးတက်ဖို.တခုထဲအတွက်နဲ. မိသားစုတစ်စုကိုယ့်ကြောင့် မဖျက်ဆီးမိစေဖို.အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။သူများ သားမယားကို ပြစ်မှားတယ်ဆိုတာ လူ.ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်မတန် ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ဘယ်လိုမှ အားမပေးသင့်တဲ့အရာပါ။ “ဒုသနသော” ဆိုတာကို နားလည်ရင် အင်မတန်ကို ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ.အလုပ်ဆိုင်ဟာ ဒေ
၀ါလီခံလိုက်ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သူ.ဘော့စ်(အိမ်ထောင်သည်)်နဲ. ဆိုင်မှဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ကြပါတယ်။ သူ.ဘော့စ်မှာ မိန်းမနဲ. ကလေး၃ ယောက်ရှိတယ်လို.ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ သူတို. တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာ လက်ထပ်ကြပြီး သူ.ဘော့စ်မှာ မိန်းမနဲ ကလေးများအား လုံးဝပြန်လှည့်မကြည့်တော့ပါ။ကလေး၃ယောက်လဲ မျက်နှာငယ်ကြရရှာပါတယ်။မိန်းမကလဲ လုပ်ချင်တာတွေ လျှောက်လုပ် ဒီလိုနဲ. မိသားစုတခုဟာ ပြိုကွဲ စီးပွားရေးတွေ ရှုံးလို. နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေ၀ါလီ ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ကျမတို.ရဲ.ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေကို မြင်ရ တွေ.ရ ကြမှာပါ။ ဒါတွေကို ဘ၀ရဲ. သင်ခန်းစာ တစ်ခုအနေဖြင့်ယူတတ်ကြဖို.လိုပါသည်။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့ မိသားစုလေးကို မဖျက်ဆီး မိပါစေနဲ. မိသားစုလေးကို မဖြိုခွဲပါနဲ.နော် ဆိုပြီး မိသားစုအားလုံးရဲ.ကိုယ်စား ဒီနေရာလေးကနေ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါရစေ။ မိသားစုတိုင်း အေးချမ်းသာယာ
ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်ပိုင် မိသားစုဘ၀လေးတွေကို ပျော်ရွှင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by FAMILY at Thursday, June 09, 2011 No comments:
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ လူတိုင်းရဲ.ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံးပါ။
အချင်းချင်း မြတ်နိုးစုံဖက်ကြလို.ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊မိဘချင်းသဘောတူလို.ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ပြီးရင်တော့ မိသားစုဘ၀တစ်ခုကို ထူထောင်ကြရမှာ မလွဲမသွေပါ။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့
လက်မထပ်ခင် living together နေထိုင်မှု.နှုန်း က
တနေ.တခြား များပြားလာပါတယ်။ အာရှ နိုင်ငံအများစုကတော့ မိမိ တို.ရဲ.ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု.များကို
ထိန်းသိမ်းပြီး လက်မထပ်ခင် အတူနေလေ့မရှိကြတာကလဲ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါ။တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ
ဆောင်တဲ့ ပွဲဆိုပြီး တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ တတ်နိုင်သလို အကုန်အကျခံပြီး ဆင်နွဲကြလေ့ရှိပါတယ်။
၁၅၅၂ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အင်္ဂလန်အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းများမှာ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ပေးတဲ့အခါ
ကျန်းမာလို.ပဲဖြစ်ဖြစ်၊နာမကျန်းဖြစ်လို.ပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်သေဆုံးခွဲခွာ ချိန်အထိ အချင်းချင်း မြတ်
နိုးစွာနဲ. ချစ်ခင်သွားကြပါမယ်လို.” ဆိုပြီး မင်္ဂလာမောင်မယ်အတွက် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ကို ရွတ်ဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်လူမျိုးတွေရဲ့ အယူကတော့ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ဘုရားသခင်ဆီက လက်ဆောင်ပါ။မိသားစုဘ၀တခုကိုစတင်ထူထောင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းမှာ ဘုရားရှေ.မှာ လက်ထပ်ကြတာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကို လူတွေရှေ.မှာ အတိအလင်းကြေငြာတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘုရားကျောင်းမှာ လက်ထပ်ပြီး မိသားစုတွေရှေ. မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရှေ.မှာ အချင်းချင်း ကတိသစ္စာဝတ်ပြုကြရပါတယ်။
ဒါကတော့ အနောက်နိုင်ငံက မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတစ်ခုပါ။ဂူဂယ်ထဲကရှာထားတာပါ။
အပေါ်ဆုံးက ပုံလေးကတော့ ဆိုက်ပရပ်စ်ဘုရားကျောင်းလေးထဲမှာ လုပ်တဲ့ ပန်းပွဲတော်က
က အမှားအယွင်းတစုံတခုပါရှိခဲ့ရင် သီးခံပေးကြပါလို.။အေးချမ်းသာယာတဲ့မိသားစု ဘ၀ကိုယ်စီ
Posted by FAMILY at Sunday, May 22, 20112comments:
အလျား အနံမရှိပေမဲ့ အသွားအပြန်ရှိမှာကတော့ မေတ္တာပါပဲ။
နှင်းပွင့်တို.မိသားစုလေးမှာ မိဘတွေက ဘာသာမတူကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်က်ိုတစ်ယောက် တကယ်ချစ်ကြလို. လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။
လူလူချင်းချစ်ခင်ပေါင်းသင်းတဲ့နေရာမှာ ဘာသာခြင်းပေါင်းတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အမိုးနဲ.
အပါးက ကိုယ့်ရဲ.ယုံကြည်ရာဘာသာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုးကွယ်ကြတာပါပဲ။အမိုးလဲသူ.ဘာသာထဲ
အပါးကိုဝင်ပါလို.အကြပ်မကိုင်သလို အပါးကလဲ အမိုးကို ဘာသာပြောင်းဖို.တခါမှမပြောခဲ့ဘူးတာ အခုနှင်းပွင့်တို. ညီအမ တစ်သက်ပါပဲ။ ချစ်တဲ့သူတွေ ဘာသာမတူလို.ဝေးကြတယ် လူမျိုးမတူလို.ကွဲကြရတယ်လို. ကြားရရင် တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ချစ်တဲ့လူတိုင်း နားလည်မှူ.တည်ဆောက်ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနဲ.အတူပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုတွေကို ဘာလို.မတည်ဆောက်နိုင်ရမှာလဲ။
အပါးက နှင်းပွင့်တို.ညီအမကို ငယ်ငယ်လေးထဲက အမြဲဆုံးမတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းက
သမီးတို.ရေ လောကကြီးမှာ ငါ့လူမျိုးသာလျှင်မြင့်မြတ်၊ငါ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသာလျှင်အကောင်းဆုံးလို.ကြွေးကြော်ပြီး လုပ်ရပ်တွေဟာ ဆိုးညစ်နေမယ်၊ကိုယ့်ကြောင့်သူများတွေ ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုရင် လူရယ်စရာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ အဲ့တော့ သမီးတို.လဲ ကိုယ့်ရဲ.ယုံကြည်တာကို ကိုးကွယ်ပါ၊
ကောင်းတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားလုပ်ပါ ကိုယ့်မိသားစု၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ့်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်ဆီးအောင်မလုပ်မိပါစေနဲ.ကိုယ့်ကိုကိုယ်မညာမိပါစေနဲ.သူများဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်ကိုးကွယ် မပုတ်ခတ်ရဘူးတဲ့.နှင်းပွင့်တို.အိမ်မှာ ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာ ၂ နေရာရှိပါတယ်။အိမ်မှာ ခရစ်စ္စမတ်ပွဲလဲလုပ်တယ်။အမိုးကကိုယ်တိုင်ချက်ပေး ၊တရားဟောတော့လဲအမိုးက
၀င်နားထောင်တာပဲ။မနက်တိုင်းအိမ်ကို ဆွမ်းခံကြတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို အပါးကအမိုးမရှိရင်ဆွမ်းလောင်းတာပဲနှင်းပွင့်တို.ညီအမလဲ ကူညီကြတာပဲ။
တစ်လတစ်ခါ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အပါးပဲဆွမ်းချိုင့်သွားပို.တာပဲ။
အမိုးနဲ.အပါးတို.ရဲ.အိမ်ထောင်ရေးဟာ အခုအနှစ်၃၀ တိုင်ခဲ့ပါပြီ။တခါတလေတော့လဲသူတို.စိတ်အခန်.မသင့်ကြတာရှိတာပဲ။ခဏပါပဲ။နောက်တော့လဲ ပြန်တည့်ပြီးပြုံးရယ်လို.။
အမိုးနဲ့အပါးတို.မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ.မှာ အတူတူမရှိနိုင်ပေမဲ့ အဝေးရောက်သမီးတွေကတော့ အမိုးအပါးတို.ရဲ.ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးတဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ.ပုံရိပ်လေးတွေကို စိတ်ကူးနဲ.မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။သူငယ်ချင်းများအားလုံးလဲမေတ္တာစက်ဝိုင်းနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀တွေကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာများဖြင့်.ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Posted by FAMILY at Tuesday, May 03, 2011 No comments: